China DHL Nkuku tube Bulk Water Pipe esi mmiri ọkụ Manufacturers na Suppliers | Ugboro abụọ Mgbaaka
DHL Corner Tube Bulk Water Pipe Boiler dị mfe ibufe na ntinye
DHL usoro nkuku tube ụdị nnukwu mmiri pọpụ mmiri
DHL Series akuku-tube ụdị mmiri ọkpọkọ mmiri mmiri bụ ụdị nke mmiri ọkpọkọ mmiri nke na-eme ala comers unheated na ya akụkụ anọ na onwe-akwado ya na oku-n'ihu transverse igbapu ma ọ bụ otu translu drum.
Anyị ejirila usoro ihe ọmụma, ngwaahịa ngwaahịa na usoro ịkpụ arụ arụ nke a. Ejikọtara njiri mara nke ala anyị na mgbaze na-aga n’ihu, mmịpụta, ndozi, nyocha na ịgagharị, anyị arụpụtala usoro ngwaahịa nke ọkpọ mmiri ọkpọ na okpu-butere mmiri nke nkuku na njiri mara nke ụlọ ọrụ anyị.
Nkuku-tube ji esi mmiri ọkụ adopts akpụkpọ ahụ mgbidi nke nwere ike ọ bụghị nanị belata ikuku leakage, kamakwa ịmụta ìhè tubing oku mgbidi kama nke arọ refractory na okpomọkụ-egbochi ihe brik mgbidi na obere okpomọkụ nchekwa ikike na obere oge
Igwe mmiri na-arụ ọrụ na nkuku nkuku na-anabata usoro nkesa mmiri pụrụ iche, nke na-enweghị nchebe. Igwe nkuku mmiri nwere nkuku nwere ihe nkwado nke nkwado onwe onye, ​​onweghi ogwe igwe na ezi oru nke seismic na-eguzogide. Nkuku-tube ji esi mmiri ọkụ adopts klookwaisi doo yinye grate Ọdịdị. Inye ikuku na edobe uzo di iche iche di iche iche kwesiri ekwesi.
Ngwunye nkuku nwere arụmọrụ dị elu, mmezi oke ibu, ọnụego ọsọ na-agba ọsọ, yana oke mmebi, nwere ike ịrụ ọrụ na-akwụsị akwụsị ogologo oge.
Ngwunye nkuku nwere njiri mara obere nrụnye, obere ntinye, obere oghere ala na ụgwọ ihe dị ala. Dị ka mmelite ngwaahịa nke igwe oku na-ere ọkụ, akuku-tube ji esi mmiri abụrụla isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị maka isonye na asọmpi ahịa n'ihi ọmarịcha agwa ndị dị elu nke ịchekwa ike.
Nke gara aga: SHF Coal Water slury Steam ji esi mmiri ọkụ
Osote: SHL Bulk Industrial esi mmiri ọkụ
boolu akuku mmiri